Famotsiam-bola Rosiana Ao Londra: Mampiseho Ny Fanaovana Izany Ireo Mpanao Gazety Miafina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2015 9:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Italiano, English
Pikantsarin'ny lohatenin'ny lahatsary fanadihadiana. Sary avy amin'i Roman Borisovich tao amin'ny Twitter.
Ny vaovaon'ny famelabelarana mafy fiantraika nataon'i From Russia With Cash dia mampiseho ny fomba fanadiovana vola maloto avy ao Rosia sy ny toeran-kafa amin'ny alalan'ny tsenan'ny fivarota-trano aman-tany ao Londra. Hatramin'ny nanombohany tamin'ny 8 Jolay tao amin'ny Channel 4 ao Angletera, efa niteraka fanentanana iraisampirenena hanavaozana ny lalànan'ny fananan-tany aman-drano ao amin'ny Fanjakana Mitambatra ny fanadihadiana.
Manaraka ekipam-panangom-baovao miafina mividy tranobe amina tapitrisa dolara marobe ao Londra ny famelabelarana. Mitono-tena ao anatin'ny lalao ho “Boris” ilay Rosiana mpanentana miady amin'ny kolikoly, Roman Borisovich, izay milaza fa manampahefana ambony avy ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ao Rosia. Milalao ho toy ny sipany “Nastya” kosa ilay Okrainiana mpanao gazety fanadihadiana, Natalie Sedletska (avy ao amin'ilay fanta-daza amin'ny YanukovychLeaks).
Selfie made during secret filming at the London luxury apartment for Channel4 film #FromRussiaWithCash @danreed1000 pic.twitter.com/0PwWMbnIHZ
— Natalie Sedletska (@natasedletska) July 8, 2015
Selfie nalaina nandritra ny fakana miafina ny lahatsary tao amin'ny tranobe mihaja iray ao Londra izay omena ny Channel4 ny lahatsary.
Mandritra ny fijerena ireo tranobe dimy, amin'ny vidiny eo amin'ny 4,5 dolara hatramin'ny 23,5 tapitrisa dolara, mihaona amin'ireo andianà mpiasan'ny fivarotana tany aman-trano avy amin'ny orinasa goavana ao Londra ireo mpifankatia, ary mandrakitra mangingina ny fihaonana.
Isaky ny fampisehoana, dia milaza fa raiki-pitia amin'ilay toerana aloha i “Nastya”. Avy eo, misarika ireo mpiasan'ny fivarotana tany aman-trano i “Boris” fa te-hividy ilay trano, saingy mila atao ao anatin'ny tsy fitononana anarana ny fifanarahana. Manazava i Boris fa hividy ny trano amin'ny vola nangalarina tamin'ny tetibolam-panjakana izy ka tsy mila na iza na iza ao Moskoa mahafantatra ny banga amin'ny teti-bola noho ny fividianana. “Ahazoako vola kely ny fifanarahana rehetra ataon'ny [Ministeran'ny Fahasalamana],” hoy i Boris tamin'ireo mpiasa tsirairay avy, araka ny nanomanana ny tetika. “Mazava ho azy fa ny vola nahazoana ity trano ity dia avy amin'ny tetibolan'ny governemanta. [Koa] laharam-pahamehana tanteraka ny fahamailoana anaty tsy filazana na inona na inona.”
Isaky ny tranga alaina sary, hita toa vonona hanohy ny varotra ireo mpiasan'ny fivarotana trano aman-trano, izay mety hahazoan'izy ireo ampahany 100.000 dolara hatramin'ny 500.000 dolara. Misy mihitsy aza ireo mpiasa sasany manonona ireo orinasam-pisolovava manampahaizana manokana amin'ny fanafenana ny mombamomba ireo mpividy ary mitari-dalana an'i “Boris” hisoroka izay mety ho olana ara-pitsarana mitranga. Ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, takian'ny lalàna ireo mpiasan'ny tany aman-trano handefa “tatitra raha misy fihetsika mampiahiahy” any amin'ny Sampan-draharaha Nasionaly Misahana ny Heloka bevava raha manana ahiahy izy ireo fa mety azo tamin'ny heloka bevava ny vola nampiasaina nividianana tany sy trano.
Niresaka tamin'ny RuNet Echo momba ny tetikasa ilay mpanao gazety Britanika Ben Joda, iray amin'ireo olona tompon-kevitra tamin'ny sarimihetsika. “Nitsiry tato anatiko ny hevitra [From Russia With Cash] raha tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka alina tao Londra niaraka tamin'ilay mpamokatra sarimihetsika Tom Costello aho. Indrisy fa tsy gaga izahay [raha nahita fa tsy mba misy mpiasan'ny tany aman-trano iray mba madio]: nitady ny fomba fanadiovam-bola maloto [famotsiam-bola] tany amin'ny fivarotana tany aman-trano ao Londra izahay nandritra ny volana maromaro. Farafahakeliny vola £ 57 miliara ($ 88,7 miliara) ny tetibidin'ny vola voadio ao Londra sy ny Fanjakana Mitambatra ao anatin'ny taona iray—na 3.6% amin'ny harinkarena faobe— ka lasa fitehirizam-bolan'ny kolikoly manerantany ny birikin'ny vanim-potoana Viktoriana ao Angletera.”
Manazava ny tohinkevitra mitombin'ny famotsiam-bola any amin'ny tsena mihajan'ny fivarotana tany aman-trano i Chido Dunn avy ao amin'ny vondrona iray miady amin'ny kolikoly Global Witness. ” Tsy mety afenina atao kidoron'ny fandriana na ambany fandriana ny vola amina miliara nangalarina fa ho angalarin'ny olona izany ary raha misy ny toerana azo antoka hametrahana azy dia ny tsenan'ny tany aman-trano ao UK no manolotra izany fialofana azo antoka izany”, hoy i Dunn tao anatin'ny horonan-tsary. “Fiantraikan'izany dia renivohitry ny famotsiam-bola manerantany i Londra.” Efa nisarika ny saina mikasika izany olana izany ny Global Witnes, tahaka ny tao amin'ny tatitra Blood Red Carpet. Asongadin'ity fandaharana ity ny raharaha tranobe Surrey 5,5 tapitrisa dolara izay heverina fa an'ny zanakalahin'ny Filoha Kyrgyz teo aloha, izay voampanga ho nanao kolikoly sy nikasa hamono olom-pirenena britanika rehefa nandositra ny tanindrazany tamin'ny taona 2010.
Araka ny fikasan'ireo mpamorona, niteraka adihevitra be amin'ny famelan'i Londra malalaka ny kolikoly manerantany ny From Russia With Cash, ary nanampy tamin'ny fanentanana hanavao ny lalànan'ny tany aman-trano ao Angletera. Taorian'ny fandefasana voalohany ny lahatsary fanadihadiana, nanjary lohahevitra malaza tao amin'ny Twitter ny diezy #FromRussiaWithCash. Nampahafantarina tao amin'ny lapa ambany amin'ny Parlemanta Britanika ny Early Day Motion (EDM) nalaina tamin'ny sarimihetsika. Ny EDM dia fametrahana ara-pomba ofisialy ahafahan'ireo mpikamban'ny parlemanta aroso iadian-kevitra anohanana hevitra iray na iresahana olana iray. Efa 30 sahady ireo solombavambahoaka nanasonia ny EDM 275:
Early day motion 275: MONEY LAUNDERING THROUGH LONDON PROPERTY MARKET
That this House notes the recent screening of From Russia with Cash on Channel 4; expresses its concern that the proceeds of corruption are being laundered through the London property market via the use of anonymous offshore companies; and recommends that corporate transparency become a Land Registry requirement so that any foreign company intending to hold a property title in the UK is held to the same standards of transparency required of UK registered companies, so preventing London or other locations from becoming a safe haven for the corrupt.
Early day motion 275: FAMOTSIAM-BOLA AMIN'NY ALALAN'NY TSENAN'NY TANY AMAN-TRANO AO LONDRA
Manamarika ny Lapa ny fijerena ny vao haingana ny From Russia with Cash tao amin'ny Channel 4; maneho ny ahiahiny fa ny vola azo amin'ny kolikoly dia fotsiana amin'ny alalan'ny tsenan'ny tany aman-trano amin'ny alalan'ny fampiasana orinasa offshore tsy mitonona anarana; ary manambara fa ny fangaraharan'ny orinasa dia takiana amin'ny Fanoratana ny Tany mba hitovy laharana amin'ny orinasa misoratra anarana ao UK [Fanjakana Mitambatra] izay orinasa vahiny te hanana tany aman-trano ao UK, mba isorohana an'i Londra sy ireo toeran-kafa tsy ho lasa toeram-pialokalofan'ireo mpanao kolikoly.
Nanatevin-daharana ny hetsika ihany koa ny Rosiana mba hanadio ny tsenan'ny tany aman-trano ao Londra, ary amin'ny fanaovana izany, dia miady amin'ny kolikoly ao Rosia mihitsy koa. Nanao antso tao amin'ny aterineto ilay mpanao politika mpanohitra, Alexey Navalny mba hiantso ny Rosiana hisioka any amin'ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta Britanika, mandrisika azy ireo hanohana ny EDM 275. Tao amin'ny lahatsoratra, manasongadina ireo tranobe roa anankiroa amina tapitrisa dolara izay fananan'olona tsy fantatra ihany koa ny ekipan'i Navalny mpiady amin’ny kolikoly, ka ilazan'izy ireo fa an'ny zanakalahin’ ireo mpikambana roa manana ny fahefany manodidina ny Filoha Putin antsoina hoe Vladimir Yakunin sy Boris Rotenberg.
Tena ilaina tokoa raha manoratra sioka marobe amim-panajana ireo solombavambahoaka Britanika ianao. Tahaka ireo
“Faly izahay fa nanatevin-daharana ny hetsika i Navalny,” Hoy i Ben Joda tamin'ny RuNet Echo. “Mahamenatra ny iray amin'ireo tahirinkevitra mahomby indrindra ampelatanan'ny mpanentana – ary fitaovana faran'izay mahomby ny fahitana olomangan'ny mpanohitra Rosiana misioka amin'ireo Solombavambahoaka Britanika fa misy ‘Tranobe azo tamin'ny famonoana olona’ ao amin'ny faritr'izy ireo. Mety hanadino izany ireo solombavambahoaka nandefasany sioka. Mihevitra izahay fa miasa ho toy ny feta kely hanamafy ny hevitra ao an-dohan'ireo mpikamban'ny parlemanta fa mihatra aman'aina ny olana misy ny fanaovana izany. Izao no fomba ankarihary hanehoana azy ireo izany fa mahatezitra Rosiana maro ny andraikitr'i Londra eo amin'ny famotsiam-bola azo avy amin'ny “milina fandroban'ny kolikoly.”
Nilaza i Judah fa naniry “hanohy ny hetsika” ireo mpanatontosa ny fanadihadiana ary hametraka andiana tolo-kevitra ara-politika novolavolain'izy ireo niaraka tamin'ny Global Witness sy ny Transparency International. “Ny tanjona tokana goavana dia ny hampitsahatra ny fahazoana mividy miafina tany aman-trano ao Angletera: fitaovana izay ahazoan'ireo mpandroba vola ao Krasnoyarsk sy Donetsk hamadika ny vola maloton'izy ireo ho lasa vola madio mahafinaritra ao amin'ny stucco [tsenambola?] ao Londra,” hoy i Judah. Nilaza koa izy fa efa nahita ny tolo-kevitra politika ireo dekàn'ny Praiminisitra Britanika David Cameron ary mandinika momba izany ankehitriny.
10 ora izayBelarosia